Waraaqo aqoonsi iyo koontooyin bangi oo la kala iibsado - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir saddexle ah: Warqadda aqoonsiga, dal ku gal iyo shatiga dareewal-nimada tagaasida. sawir: Rikspolisstyrelsen, Christine Olsson/TT.
La daabacay fredag 21 april 2017 kl 09.41
Waaxda wararka idaacadda dalkan Sweden ayaa maanta kashiftey dad waraaqahaas aqoonsiga iyo koontooyinka bangiyada iibiya amba ka ganacsada, kuwaas oo qaarkood ku sugan yihiin waddada Drottninggatan uuna tagtagi jiray eedeeysanihii falka argagixis ka geeystay magaalada Stockholm muddo iminka laba toddobaad laga joogo.
Waakan mid ka mid ah dadka falalkaas gacanta kula jira, wuxuuna yiri sidan soo socota :
-Waxaan hayaa waraaqa aqoonsi oo aan iibinayo, dhanka kalana haddii aan runta kuu sheegana heshiiska aniga ayaa qoraya adiguna si aan dhib iyo walwal laheyn ayaa ku shaqeysaneysaa mushaarkaagana ku qaadaneysaa.
Ninkaan hadlaya ayaa 2 500 oo karoon wuxuu bishiiba ka helaa in uu ijaarto afartiisa lambar iyo koontadiisa bangiga taas oo dadaka aan dalkaan Sweden sharciyada ku laheyn u sahleysa in ay dalkaan ka shaqeystaan iyagoo ugu muuqda shirkadaha iyo dadka shaqa bixiyayaasha ah in ay waraaqa sax ah oo sharci ah wataan.
Xayeysiis ganacsiga noocaan ah ku saabsan kaas la soo dhigey bar ka mid ah baraha internet-ka ayaa lagu sheegey in ganacsiga noocaan ahi yahay mid aan wax khatar ahi qofka uga imaaneyn, qofka xayeysiiskaas soo qoreyna wuxuu si cad bartaas ugu muujiyey taleefoonkiisa gaarka ah.
-Waxaan aaminsanahay amaba aan ogahay in arrinkaani boqolkiiba 70 ka dhaco goobaha shaqada , saaxiibadey oo dhammina waa wax ay ila qabaan oo wada ogyihiin.
Ninkaas aad codkiisa maqasheen waa nin magac kale leh laakiin hadda aanu ugu yeereyno Danijir, waa nin da’diisu dhexdhexaad tahay kana yimid dal ka mid ah dalalka dhaca bartama qaaradda Aasiya.
Ninkaani wuxuu labadii sannadood ee la soo dhaafey ku noolaa magaalada Stockholm isagoo aan wax sharci ah laheyn ka dib markii mudadaas ka hor dalkaan sharciga looga diidey.
Waxyaalaha ninkaani ka hadlayaana waa waraaqa aqoonsi oo bug ah oo ay isticmaalaan dad dalkaan Sweden si sharci darro ah ugu nool ugana shaqeysta, qaar badan oo ka mid ahina sida ninkaan hadlayaa waxay ka yimaadeen dalalkii waagii hore la isku oran jirey Midowga Sovietka.
Ninkaan ayaa boorsadiisa jeebka wuxuu ka soo bixiyey waraaqa aqoonsi , wuxuuna yiri:
-Teesarahaani waa ka dalka Bulgaariya, waxaana ku gatey 1 500 oo Euro. Sababta aan u gateyna waa in aan qofkii igu joojiya rugta tareenada iwm aan tuso in aan ahey muwaadin midowga yurub u dhashey sidaas oo ay tahayna marna uma baahan in aan aqoonsigaan isticmaalo.
Ninkaan aan hadda Danijir ugu yeerney balse magac kale leh.
Ninkaan aan isna ugu yeereyno Tigran ayaa sidoo kale wuxuu ka yimid dalalka dhaca bartama qaaradda Aasiya kuwaas oo horey uga tirsanaan jirey dalkii horey loo oran jirey Midowga Sovietka.
Ninkaan ayaa 13-kii sanee u danbeysey wuxuu ku noolaa magaalada Stockholm, 2 sano kaliya ayuuna muddadaas ka shaqeeyey, wuxuuna yiri isagoo idaacadda Sweden u waramaya:
-Markii aan dalkaan imid ayaan iibsadey baasaboor bug ah oo laga leeyahay dalka Estland kaas oo aan ku gatey 6 500 oo karoon oo markii danbe la iga xadey. Kadib ayaan 1 200 oo karoon ku iibsadey kaar bug ah oo ah kuwa loo yaqaan LMA-kort ee la siiyo dadka qaxootiga dalkaan Sweden ku ah ee hey’adda socdaalka dalkaan wali jawaabta ka sugaya.
Isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yiri:
-Hey’adda socdaalka iyo tan canshuuraha dalkaani isma oga, qof dhinac ka qaadanaya 61-ka karoon ee maalin kasta la siiyo dadka sharciga sugaya ayuu hadana dhanka kale si bareer ah u shaqeysanayaa xataa iyadoo arrinkaasi uu dalkaan sharci darro ka yahay.
Danijar ayaa hadda ka hor dhaawac wuxuu ka soo gaarey goob dhisme oo uu ka shaqeynayey balse ninkii shaqaaleysiiyey ayaa diidey ama joojiyey in Ambulans loogu yeero.
Ninkaan ayaa waxaa ku adkaatey in uu shaqa helo sidaas oo ay tahayna waxaa bil kasta looga baahan yahay in uu bixiyo 2 000 oo karoon gurri todoba qof oo uu ka mid yahay u wada ijaaran.
Sidaas oo ay tahay ninkaan ayaa noloshaan ka door bidaya faqriga iyo cadaadiska boolis ee dalkiisii hooyo ka jira, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
-Qadarin weyn ayaan u hayaa dadka reer Sweden sidaas si la mid ah ayeyna u qadariyaan dadka ka yimid dalkaan ka soo jeedo. Waa qalad in wax la khaa’ino laakiin waxaan jirin waddo kale oo noo furan waayo qoysaskayagii waxay ku gaajoonayaan dalkii aan ka nimid , ayuu yiri Danijar.
Wariyaha idaacadda Sweden ayaa dhowr daqiiqo markii uu baarayey wuxuu heley bogag internet-ka ah oo ay leeyihiin dad luqadda ruushka ku hadla oo ku nool dalkaan Sweden, kuwaas oo lagu xayeysiiyo in ay si bug ah dadka ugu sahli karaan in ay dalkaan Sweden ku noolaadaan kana shaqeystaan.
Bogaggaas waxaa sidoo kale ku qornaa waraaqa bug ah oo dad lagu shaqaaleysiiyey, adreesyo, waraaqa meher , waraaqa aqoonsi, teesareyaasha baabuurta lagu wado oo kuligood bug ah lagana leeyahay dalalka Baltikum-ka, waxaana baasabooradaas qaarkood saaran fiisooyin waqtiya kala duwan dhacaya.
Dalkaan Sweden ayey adag tahay in sharci ay ka helaan ragga kaligood ah ee ka yimid dalalkii horey la isku oran jirey Midowga Sovieti, laakiin taas badalkeeda waxay isticmaalaan aqoonsiyo iyo waraaqo bug ah si ay dalkaan ugu sii nagaadaan.
Rakhmat Akilov oo ah ninka lagu tuhunsan yahay in uu ka danbeeyey falkii danbi ee gaariga dadka lagu jiirsiiyey bartamaha magaalada Stockholm, ayaa ka mid aha dadka hababka noocaan ah ee sharci darada ah isticmaala si ay dalkaan Sweden ugu sii nagaadaan.
Talefishinka SVT ayaa kashifey in hotel lagu magacaabo Scandic Hotel laga shaqaaleysiiyey qof isticmaalaya waraaqa aqoonsi oo uu lahaa Akilov, sidaas oo ay tahayna qofkaan waxaa adrees u ahaa guri kale oo aan aheyn kan uu ku nool yahay.
Waaxda wararka idaacadda Sweden ayaa E-mail u dirtey bog afka ruushka ku qoran oo iibiya waraaqahaas aqoonsiga ee bugta ah, waxayna ku soo jawaabeen:
Aqoonsi kastoo dhalasho ee aad rabtid waad naga heleysaa. Haddey ahaan laheyd tusaale ahaan tan Grekland, Lettland iyo Tjeckien. Kuwaas oo dhan kii aad doonto ayaadna Sweden ku dagi kartaa, afrta lambarna uga heli kartaa.
Qiimaha aqoonsiyadaas bugta ah lagu iibinayo ayaa kala ah:
-500 oo karoon kaararka loo yaqaano LMA-kort ee la siiyo dadka dalkaan jawaabaha sharci ka sugaya. 100 000 oo karoon oo laga rabo qofkii raba dhalashada dalkaan Sweden.
Qofkan ka soo jawaabey E-mailka idaacadda ayaa intaas ku darey in waxa uu sheegayo aan dhayal iyo been loo qaadan ee ay dhab tahay.